MT5 Questions | Trade Forex and Crypto with gt.io | Africa
SU'AALAHA BARNAAMIJKA GANACSIGA
1. Barnaamijkee ganacsi ayaa la heli karaa?
Waxaan bixinaa barnaamijka multi-asset Metatrader 5 (MT5) oo aalado kala duwan ee taageero ganacsiga gacanta ama tooska iyo isticmaalka La taliyayaasha Taqasuska (EA).
Waxaan bixinaa kuwa xiggo:
- MT5 Desktop loogu tallogalay Windows iyo Mac.
2. Sidee ayaan u dajistaa MT5 Desktop loogu tallogalay Windows?
Waxaad ka dajisan kartaa MT5 Desktop-ka loogu tallogalay Windows aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha) adiga oo riixayo aastaanta MT5 ee geeska kore ee midig oo dooranayo Meta Trader 5-ka loogu taloogalay Windows, ama adiga oo booqanayo bogga Barnaamijka oo riixayo aastaanta MT5 Desktop loogu tallogalay Windows.
3. Ma suurtogal baa in kumbiyuutarkayga ay ku jiraan wax ka badan hal MT5 Desktop?
Haa waad awoodaa adiga oo dhowr nooc kaga kala shubaya meelo kala duwan.
Markii aad ku dhufatid dejiso MT5-ka loogu tala galay desktop-ka ee ku jirta settingiska.. Waad riixi kartaa raadi oo dooran kartaa gal kale ama waxad raacin kartaa egestanshan ee C:\_Program Files\_gt.io MT5 Terminal sida C:\_Program Files\_gt.io MT5 Terminal 2. Kadib riix ku xiggo si aad u dhameysid gelinta tusaalooyinka kale.
4. Sidee ayaan u geliyaa MT5 Android/iPhone/iPad keyga?
Waxaad toos u aadi kartaa dukaanka qalabkaaga, ama waxaad dooran kartaa qalabka quseeyo oo gudaha aagaaga illaalada (Bogga Macaamiisha), riix badhanka MT5 oo geeska midig ee kore, oo kadib dooro dukaanka qalabka quseeyo.
Isticmaalayaasha Android waxay ka raadin karaan barnaamijka MT5 gudaha Play Store oo waxay riixi karaan 'Install' iyo kadib riix 'Accept'.
Isticmaalayaasha iOs waxay ka raadin karaan barnaamijka MT5 gudaha App Store iyo riix 'Get'.
5. Sidee ayaan uga helaa gt.io on Android/IOS keyga?
Markii aad kushubtid Barnaamijka MT5 aaladaada, ku qor 'GTioMarketsPty' aaga raadinta ee 'Find Broker'. GTioMarketsPty-Live ayaa soo baxayo. Riix iyada, geli warbixintaada gelinta, furaha, oo riix GTioMarketsPty-Live ee loogu tallogalay live server ama GTioMarketsPty-Demo loogu tallogalay aqriyaha demo.
6. Maxay fariiin cilladeedka 'Ogolaanshuhu Wuu Fashilmay' (Authentication Failed) la macno tahay?
Waxaa laga wadaa in macluumaadkaaga Gelitaanka ama Furaha uu qalad yahay.
7. Seerfarkee ayaan doortaa markii aan galo barnaamijkeyga MT5?
Wixii Koontada Ganacsiga Tooska ah fadlan dooro seerfarka 'GTioMarketsPty-Live'.
Koontada Ganacsiga Demo fadlan dooro serfarka 'GTioMarketsPty-Demo'.
8. Halkee ayaan ka helaa waxaan ku geli lahaa iyo baaswoodhkii akoonkayga ganacsi?
Waxaad ka heli kartaa sharaxaadahaaga gelitaanka iyo baaswuudhka i-meelkii aad heshay markii aad fureysay koontada ganacsiga ama adiga oo doorta dalabka badhanka 'Trading' ee aagaaga illaalsan (Bogga Macaamiisha), halka aad ka arki kartid dhammaan lambarada gelitaanka oo akoon walboo ganacsi ah ee aad leedahay. Waad koobiyeyn kartaa baaswuudhkaaga adiga oo furayo liiska badhanka hoose oo badhanka Action ee ku yaalo geeska midig ee kore ee koonta walboo ganacsi ah oo dooranayo 'Copy Password'.
9. Sidee ayaan u galaa koontadeyda ganacsiga?
Wixii Ganacsadaha Desktop iyo Web:
1. Dooro dooqa 'Log in to Trade Account' ee dalabka Feelka ee ka furmayo Barnaamijkaaga.
2. Geli warbiixntaada Gelitaanka iyo Baaswuudhka.
3. Dooro aqriyaha quseeyo oo riix Login OK.
Loogu tallogalay Android/IOS:
1. ka raadi 'GTioMarketsPty' aaga raadinta 'Find Broker'.
2. Dooro GTioMarketsPty-Live.
3. Geli macluumaadkaaga Gelitaanka iyo Baaswuudhka.
4. Dooro seerfarka quseeyo oo riix Login.
10. Miyaan isticmaali karaa Aqoonsiga aageyga illaalsan (Bogga Macaamiisha) si aan u soo galo boggayga ganacsi?
Maya. Aqoonsigaaga Macmiilka wuu ka duwanyahay midka macluumaadka gelitaanka MT5.
11. Maxaan u arki karaa kaliya dhoor qalabyo markii aan galo barnaamijkeyga?
Markii aad gashid barnaamijka oo markii kugu horeysay, waxaa kaliya uu ku tusayaa 10 qalabyada oo ku xiran. Haddii aad rabtid inaad ku dartid wax badan, waxaad midaan ku sameyn kartaa adiga oo hoos uga dagayo hoosta bogga Market Watch oo riixayo 'click to add...'), raadineysid jooga ganacsiga, oo riixeysid geli. Haddii aad rabtid inaad aragtid dhammaan qalabyada la heli karo, si fudud riix midigta ee Market Watch oo door 'Show All'.
12. Sidee ayaan ugu daraa qalab app-keyga mobeelka MT5?
Waa inaad marka koowaad gashaa app-ka mobeelkaaga MT5, dooro fiirinta Xigashooyinka, dooro '+' aastaanta oo kadib dooro heerka hantida quseyso. Kadib, dooro qalabka adiga oo riixayo intaas ka dibna diyaar baad tahay.
13. Sidee ayaan u daaraa 'One Click Trading'?
Waxaad riixi kartaa midigta oo shaxda oo dooro 'One Click Trading'. Bog ganacsiga yar ah ayaa ka soo baxayo geeska bidix ee kore ee shaxda halka aad gelin kartid qiyamka oo aad kadib dhaheysid ku Ibi am ku Ibso hal taabasho.
14. Sidee ayaanExpert Advisor ugu shubaa MT5?
4. Bogga “Hantida” ee soo baxo, taabo 'Allow Auto trading'
Raadi Aaladaha badhanka Tools -> Options -> Expert Advisors
Hadeer waxaa kuu suurtogaleyso inaad aragtid aastaan wadata goobo cagaaran oo geska midigta kore ee shaxdaada si aad u aragtid inaad u furtay EA gaaga si sax ah.
15. Sidee ayaan Tilmaamayaal ugu daraa Jadwalkeyga MT5?
Waxaad sidaas ugu dari kartaa adiga oo isticmaalayo mid ka mid ah qaababka soo socdo:
1. Soo gal boggaaga oo raadi badhanka Insert ee dalabka kore, dulsaar tilmaamayaasha oo dooro Tilmaamaha aad rabtid inaad ku dartid. Kadib xaqiiji hantiyaha kor saar Tilmaamayaasha ee bogga xiggo iyo riix 'OK'.
2. Gal boggaaga, aad badhanka Dalabka Fiiri oo dooro 'Navigator' haddii aysan horaan usoo bixin. Riix aastaanta + ee ku taalo Tilmaamayaasha si aad u balaarisid dhammaan dooqyada. Dooro, jiid oo dhig Tilmaamaha aad rabto inaad ku darsato sawirkaaga. Kadib xaqiiji hantiyaha ku taalo Tilmaamayaasha ee bogga xiggoadiga oo riixayo 'OK'.
16. Sababtee ayaanan u geli karin bogeyga MT5?
Waxaa jiro dhowr sababood oo sababta aanan kugu suurtogaleyn inaad gashid barnaamijkaaga. Kuwaan waxay noqon karaan:
1. Macluumaadkaaga soo geliseed ayaa khaldan. Fadlan hubi inaad gelisay macluumaad saxda ah.
2. Waxaad dooratay seerfar qaldan. Fadlan hubi inaad dooratay GTioMarketsPty-Live loogu tallogalay koontada ganacsiga dhabta ah iyo GTioMarketsPty-Demo loogu tallogalay Koonto ganacsiga Macmala.
3. Barnaamijka ganacsiga MT5 ee aad isticmaaleysid ma ahan barnaamijka gt.io's. Fadlan hubi inaad ka dajisato barnaamijka websaydkeena ama Bogga Macmiilkaaga.
4. Waxaad ku haysata cillad interneet. Fadlan hubi inaad ku xirantahay intarneetka.
Haddii aad weli wajheysid cillad waxaad isla markiiba nagala soo xiriiri kartaa taageero. Fadlan xasuusnoow in sawir kasta oo aad shaashadda ka qaadday oo aad noo soo dirto naga caawin karo aqoonsashada dhibta.